ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၅-၃-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၅-၃-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရောက်ချိန် လက်ပံတောင်းဆန္ဒပြပွဲ ဆက်ဖြစ် click
- အစီရင်ခံစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မုံရွာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှင်းလင်း click
- “တိုင်းပြည်အတွက် အကောင်း ဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်” လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော click
- ပယောဂ ပါမပါ ကိုယ်တိုင် စုံစမ်းကြပါ click
- လက်ပံတောင်းကိစ္စ အမြင်အမျိုးမျိုး click
- လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသခံတွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ရုပ်သံ) click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ပံတောင်းတောင်ခရီးစဉ်၊ မတ် ၁၄ (ရုပ်သံ) click
- မြေသိမ်းမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေ မနစ်နာအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ ဦးရွှေမန်း ပြော click
- ကချင်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေး ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် မျှော်လင့် click
- မြင်းခြံ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်သူတွေ လိုင်ဇာဒုက္ခသည်တွေကို သွားရောက်ကူညီ click
- နိုင်ငံတကာ မြစ်ချောင်းများနေ့ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံမှာ ကျင်းပည click
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို နယူးဇီလန် ဘုရင်ခံချုပ် ကြိုဆို click
- မီဒီယာဥပဒေမူကြမ်းကို ရပ်ပြီး ဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ တိုက်တွန်း click
- ၈၈ မျိုးဆက် ကိုဌေးကြွယ် အမေရိကန် ရောက်ပြီ click
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဖွင့်ဆိုချက် စိစစ်ရေးကော်မတီ အတည်ပြု click
- ရှမ်းပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ကူညီမယ် click
- ဂျော်ဒန်အထည်ချုပ်စက်ရုံအလုပ်သမား သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ရုပ်သံ) click
- မစိုးရိမ်ဆရာတော် ပျံလွန်တော်မူ click
- သင်္ကြန်သံချပ် စိစစ်မှု စာနယ်ဇင်းသမားအများစု လက်မခံ click
- မြ၀တီက ချစ်ကြည်ရေးတံတား ယာဉ်ပိတ်ဆို့မှု ဖြေရှင်းပေးစေလို click
- အိန္ဒိယမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးကြီး ၆ ဦး ဆိုလာနည်းပညာ သွားရောက် သင်ယူမည် click
- မြန်မာပြည်က ၀တ္ထုရေးတဲ့ စာရေးဆရာ ဆောင်းဝင်းလတ် အမေရိကန် ရောက်ပြီ click
- အောင်ဆန်း စက်မှုလက်မှုကျောင်းက ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ် (ရုပ်သံ) click
- နယူးယောက်ပြတိုက်ထဲက ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ သာဓု click
- ရှမ်းပြည်နယ် ဘော်ဆိုင်းဒေသက အဆိပ်သင့်ရေတွင်းတတွင်း (ရုပ်သံ) click
- ရန်ကုန် လမ်းကြား အမှိုက် (ရုပ်သံ) click
- ပုပ်ရဟန်းမင်းသစ်ရဲ့ ပထမဆုံး ဝတ်ပြုတရားပွဲ click
- ပုပ်ရမင်းကြီးသစ် ပထမဆုံး တရားမြွက်ကြား click
- ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis (ရုပ်သံ) click
- အိုဘားမား သွားမယ့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းခရီး (ရုပ်သံ) click
- နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကယ်ရီ အရှေ့တောင်အာရှ ခရီးထွက်မည် click
- တရုတ်သမ္မတသစ် ရှီကျင့်ပင် တင်မြှောက် click
- ရှီဂျင်ပင်းကို တရုတ်သမ္မတသစ်အဖြစ် တင်မြှောက် click
- တရုတ်သမ္မတနဲ့ လူထုမျှော်လင့်ချက် (ရုပ်သံ) click
- တောင်ကိုရီးယား-ကန် စစ်လေ့ကျင့်မှု ကင်ဂျုံအမ် စောင့်ကြည့် click
- ခမာနီခေါင်းဆောင်ဟောင်း အီယန်ဆရီ ကွယ်လွန် click
- HIV ပိုး ရှိသူ စောစောကုက ဆေးဖြတ်လည်း ကျန်းမာ click
ဟား ... ဟား ... ဟား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ဖြစ် တတ်တယ် ... ကျမလိုပဲ ။ ကျမနဲ့မွေးနေ့ မွေးရက်တူပြန်
တာဆိုတော့ အတွေးအခေါ် ဦးနှောက်ချင်း မတူတာ ငထူ
ငအ ဖြစ်နေတာ အာပေါက်အောင်ပြောရတာ
အကျင့်ယုတ်တာမျိုးနဲ့တွေ့နေရင် စိတ်ထဲကနေ ဆဲနေမလား ပဲ နော် ... ကျမဆိုရင် စိတ်ထဲက ( You .. Stupid ... Go and Die ! Useless ! ) လို့ စိတ်ထဲက ဆဲတတ်တယ်